Zano raMwari reKutanga muEdeni raive rei?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Zano raMwari reKutanga muEdeni raive rei?
Zano raMwari reKutanga muEdeni raive rei?
Chii chakatadzikwa naEva?
Kana muchida kuziva kuti chii chingadai chakaitika pakutanga, munofanira kuenda kumagumo, sezvo Mwari haashanduri hurongwa hwake. Satani anogona kunonotsa zano raMwari, asi haakwanisi kurishandura.
MARAKI 3:6 "Nokuti ini JEHOVA handishanduki,
Denga richazadzwa sei nevanhu pakupedzisira?
Kuchatanga kuuya rumuko, apo vakafa vachamutswa kubva kumakuva (guruva renyika). Izvi zvichaitika neShoko richataurwa naJesu Kristu. Zvinenge zvisina chekuita nekuzvarwa nemukadzi. Vanhu vachamutswa mumiviri yekubwinya isina kufuka kuvora.
65-1204 KUKWIRA KUDENGA MUKUBWAIRA KWEZISO.
Kudanidzira; inzwi; zvino hwamanda.
Kudanidzira: mutumwa kana kuti nhume ichigadzirira vanhu.
Pechipiri kunouya izwi rerumuko: izwi rimwechete, iro, izwi guru kuna Johane 11:38-44, rakadaidza Razaro kubva muguva.
Mutumwa Mukuru achauya panyika kuzomutsa vakafa. Ndicho chinangwa chikuru cheMutumwa mukuru.
Mazwi akabatwa paitaura hama Branham aya vakaataura gore rimwechete mumashure mekuonekwa kweGore guru rinoshamisa muna 1963, uye hama Branham vaive vachiri vakamirira Mutumwa Mukuru kuti auye panyika kuzomutsa vakafa. Pano hama Branham vakataura pamusoro peMutumwa mukuru seMutumwa wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10.
Tarirai Mutumwa wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 paanomira panyika nemugungwa.
Mugungwa nepanyika ndipo pakavigwa maKristu akafa mukati memakore 2000 enhorondo yekereke.
Shumba inorira -- Shumba yerudzi rwaJuda. Kurira kwekupedzisira kwekukunda pamusoro paSatani ndipo paachamutsa vakafa, oisa Mwenga wake anorarama mumiviri isingawori, miviri yekubwinya. Zvino Satani anenge asisina simba zvachose kana kutonga pamusoro peMwenga waKristu. Jesu akakunda rufu paCalvari.
Pakumutswa kwevakafa anenge akurira guva.
Iye “akadanidzira nezwi guru” zvinofambidzana nekumutswa kwaRazaro kubva kuvakafa. Munhu mumwechete.
“Akati adanidzira” zvinoyanana nekumutswa kubva kuvakafa kwevatsvene veTestamente Yekare mumashure mekumuka kwaJesu kubva kuvakafa paCalvari.
Bhaibheri rinoyananisa “Akati adanidzira” nekumutswa kwevakafa, nekutaura pamusoro pekumuka pasati patombotaurwa nezvekuvigwa kwake.
Saka Zvakazarurwa 10:3 rinotaura pamusoro pekumutswa kwevazhinji vevatsvene veTestamente Yekare, uye kumutswa kwemunhu mumwechete.
Izvi zvinoreva kuti panouya Mutumwa kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10, chinangwa chake ndechekumutsa vatsvene vose kubva munguva nomwe dzemakereke. Asi tichiwedzera, anomutsa munhu mumwe nemumwe akazvimiririra. Jesu haatadzi kuona munhu mumwechete akazvimiririra kunyangwe pari paruzhinji.
Kune Mutumwa mukuru mumwechete chete, Mikaere.
JUDASI 1:9 Asi Mikaeri Mutumwa Mukuru, nguva yaakarwa naDiaborosi, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMosesi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakuraire.
Mutumwa mukuru ndiye achamutsa vakafa. Asi Mosesi aifanira kumuka vatsvene veTestamente yekare vasati vamuka nekuti iye naEria vaifanira kunosangana naJesu paGomo reKubwinya. Saka seMutumwa Mukuru, Jesu akaenda “akanoba” muviri waMosesi kubva kuna Satani nekuti Jesu aive asati akunda rufu nehadhesi. Mumazuva eTestamente Yekare Satani aive achiri nekiyi dzerufu negehena.
55-0109 KUTANGA NEKUGUMA KWEMUGOVE WEVAHEDENI
“Uye panguva iyoyo Mikaeri achamira, muchinda mukuru.” Mikaeri aive Kristu, ndizvo chaizvo, Airwa hondo dzevatumwa kudenga naSatani. Satani naMikaeri vakarwa kana kuti vakarwisana, toti.
SeMutumwa Mukuru Mikaeri, Kristu anogona kuuya pasi panyika omutsa vakafa, uku hakusi kuuya kwaJesu mumuviri wake wakamuka kubva kuvakafa.
Vatendi vose, venguva dzese, vachamutswa muhupenyu husingagumi mumiviri yakadanwa kubva kuguruva renyika.
Saka kana izvi zvichaitika pakupedzisira, zvino izvi ndizvo zvaidiwa naMwari kuti zviitike pakutanga.
Saka zano raMwari pamusoro peEdeni raive rei?
Pakutanga akasika munhu-wemweya Adamu kubva pasina.
Adamu aivewo nehunhu hwechikadzi mumweya wake.
Mwari Mweya, saka kuva mumufananidzo waMwari, Adamu aifanira kuva Mweya pachake.
GENESISI 1:26 Mwari akati: Ngatiite munhu no­mufananidzo wedu, akafanana nesu;
Rudzi rwevanhu rwaive munaMwari kubva pakutanga. Tese taive mundangariro dzaMwari.
ZVAKAZARURWA 13:8 Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo vasinakunyorwa mazita avo mubhuku yeGwaiana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika.
Saka Mwari mweya unoshamisa asi mumweya iwoyo maivewo nehunhu hwevanhu mauri.
Saka Adamu maari mweya waive wakakura waive wechirume, asi maari maive nehunhu hwechikadzi.
GENESISI 5:2 Wakavasika murume nomuka­dzi; akavaropafadza, akavatumidza zita rinonzi Munhu, musi wavakasikwa.
Saka vaive zvisikwa zvemweya. Mweya haugoni kugadzirwa nechimwe chinhu chepanyika pano.
Muviri zvisinei, hauna kusikwa, nekuti wakaitwa kubva muguruva renyika.
GENESISI 1:28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai, muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi;
Vaive vachiri zvisikwa zvemweya. Kuberekana kwaitaurwa kwaive kubereka kwemweya. Vaisaziva kuti izvi zvairevei. Vaifanira kumirira kuti Mwari azvizadzise. Sekumirira kwatinofanira kuita kuuya kwaShe. Hatigoni kuzadzisa Kuuya kwaShe tega. Danieri akakuona sedombo rakatemwa pasina maoko. Kuuya kwaShe hakudi rubatsiro rwevanhu.
"Berekanai" Ndiro raive gwara rekutanga naro.
GENESISI 1:11 Mwari akati: Nyika ngai­merese uswa nemiriwo inobereka mbeu, nemiti inobereka michero inamarudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika; zvikaita saizvozvo.
“Berekanai” zvinoreva kuti mbeu iri mukati memuchero.
RUKA 1:42 Akadana nenzwi guru, akati: Wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, nechibereko chedumbu rako chakaropafadzwa
Mwanakomana akaberekwa nemhandara Mwana, kana chibereko, chedumbu raMaria. Mai vacho ndivo muti wemuchero.
Kubereka, Maria aifanira kuva nemuchero, mbeu yawo iri mukati mawo. Anofanira kubereka Mwana ane kuzara kweShoko raMwari Maari. Emanueri, Mwari unesu.
Ndizvo zvaidiwa pakuberekana kwemweya.
Mwari mweya unoshamisa usingaonekwe asiwo ane hunhu hwevanhu maari hwaaida kuratidza mumiviri yevanhu.
Kuna Genesisi Chitsauko 2, Mwari akaisa mweya wemunhu Adamu mumuviri wemunhurume wenyama.
GENESISI 2:7 JEHOVA Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake; munhu akava mweya mupenyu.
9 JEHOVA Mwari akameresa pasi miti yose inofadza meso, neyakanaka kudya; uye muti woupenyu pakati pomunda, nomuti wokuziva zva­kanaka nezvakaipa.
Zvino Adamu aive ava mumuviri wenyama, aikwanisa kunyengerwa. Saka Mwari akamuyambira pamusoro pemiti miviri yaive yakarukaniswa pakati pemunda.
Muti wehupenyu ‘waivewo” pakati pemunda, zvichireva kuti paivewo nechimwe chinhu pakati pemunda. Ndiwo waive muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa.
GENESISI 3:22 Zvino JEHOVA Mwari akati, "Ta­rirai, munhu ava somumwe wedu zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa; zvino zvi­mwe angatambanudza ruoko rwake aka­torawo zvomuti woupenyu, akadya, aka­rarama nokusingaperi.
Tsime rimwechete chete rehupenyu husingagumi ndiKristu. Saka ndiye Muti weHupenyu.
JEREMIA 17:7 Wakaropafadzwa iye munhu unovimba naJEHOVA, wakaita Jehovha chivimbo chake.
8 Nokuti uchava somuti wakasimwa pamvura, unotuma midzi yawo kurwizi, usingatyi kana kupisa kuchisvika, asi mashizha awo achava matema; haungarangariri pagore rokusanaya kwemvura, kana kurega kubereka zvibereko.
Muti mucherechedzo wemweya wemunhu akarurama. Mweya iwoyo haubvi paRwizi rweHupenyu, runova Bhaibheri.
Kana Jesu ari Muti weHupenyu, Satani ndiye muti wekunyengera wezvakanaka nezvakaipa.
Chinhu chakaipa, chine zvakanaka zviri machiri, chinonyengera zvakanyanya kudarika zvinoitwa nechakaipa chaicho.
Mwari akabva abvisa chikamu chemukadzi mumweya waAdamu, akachiisa mumuviri wakazvimiririra wega.
Nyama neropa hazvigoni kugara nhaka yevushe bwaMwari. Hakuna chinhu chine ropa machiri chinorarama nekusingaperi.
I VAKORINTE 15:50 Zvino, hama dzangu, ndinoreva ndichiti, nyama neropa hazvingagari nhaka yovushe bwaMwari; nokuvora hakungagari nhaka yokusavora.
Saka maive musina ropa mutsinga dzaAdamu nemukadzi wake. Mweya Mutsvene waifamba mutsinga dzavo, uchiita kuti varambe vari vapenyu.
GENESISI 2:23 Munhu akati, "Zvino uyu ipfupa ramapfupa angu, nenyama yenyama ya­ngu, uchatumidzwa Mukadzi, nokuti wa­kabviswa paMurume."
Hapana kutaurwa nezveropa.
Pasina ropa kunogona kushaikwa kusangana pabonde sezvo nhengo yemunhu rume ichida ropa kuti imire. Saka vaive vasingazivi zvachose kuti vaive vakashama.
GENESISI 2:25 Vose vari vaviri vakanga vasina kusi­mira, munhu nomukadzi wake, asi ha­vana kunyara.
Paive pasina rudo rwekusangana pabonde pakati pavo.
Kuna Genesisi Chitsauko 1 Adamu nemukadzi wake vaive vanhu vemweya. Kusangana pabonde hakuitwi nemweya. Zvinogona kuitika chete mumiviri yenyama.
Saka muChitsauko 1, Mwari akaudza mweya wemurume waive wakabatana newechikadzi kuti uberekane uzadze nyika. Izvi zvinoreva kuberekana pamweya. Izvi havana kuzvinzwisisa zvakare.
Saka zvese zvavaifanira kuita kwaive kumirira kusvikira Mwari aita kuti zano rake riitike. Kana vakaita chimwe chinhu, zvaizova zvakaipa sezvo ndangariro dzaMwari dzakakwirira pane ndangariro dzedu. Uye hatigoni kufungidzira kuti Mwari ari kufungei.
Saka Mwari paakavaisa mumiviri miviri yenyama yakasiyana kuna Genesisi Chitsauko 2, aive ayambira Adamu kare pamusoro pemuti wekuziva. “kuzivana kwemukadzi nemurume” ndiko kutaurwa kunoitwa nevakuru pamusoro pekusangana pabonde.
GENESISI 4:1 Zvino Adhamu wakaziva mukadzi wake Evha; iye ndokutora mimba, akapona Kaini, akati, "Ndawana munhu, ndichibatsirwa naJehovha."
Saka kana tichiwedzera, Mwari akapa mukadzi, aive ava mumuviri wenyama, humhandara.
Adamu paakaitwa munhu wenyama kuna Genesisi Chitsauko 2, Mwari akayambira Adamu pamusoro pemuti wekuziva – mweya waSatani wekunyengera. Muti wekuziva waive usiri muti unomera wokura, sezvo Mwari aive ataura pazuva rechitatu kuti miti yese yaive yakanakira kudya.
Adamu paaive mweya kuna Genesisi Chitsauko 1 kwaive kusina yambiro yaakapihwa. Saka muti wekuziva waive usiri muti watinoona unokura muvhu.
Kuna Genesisi Chitsauko 1 Adamu aive Mweya, saka aikwanisa kuona Mweya waSatani, unomiririrwa nemucherechedzo wemuti wekuziva, saka aisazobvuma kunyengerwa naye.
Nei Adamu naEva vakapiwa nhengo dzekusangana pabonde?
Hunhu hahuna zvahunoreva kana pasina kuedzwa nemiyedzo, nekuti hapana kurwisana pasina muvengi, uye hapana kukunda pasina matambudziko. Hunhu hunokwanisa kuva chibereko chehondo huru nemuvengi akasimba.
Kutsungirira kunouya kubva pakurwadziwa kwatisingagoni kudzora isu pachedu. Hunhu hahugoni kupihwa kumunhu. Hunhu hwemunhu hunonatswa nekusangana nematambudziko kukurirwa uye kuwomerwa.
Kana pasina kurwa, hapana kukunda. Kutenda kunouya chete kana tasangana nezviitiko zvatisingagoni kugadzirisa isu tega.
Saka tinoda muvengi kuti atiumbe.
Simba rekugona kusarudza kuita zvatinoda mupfungwa dzevanhu rinobereka kuda kuziva. Tinogaroda kuziva zvakawanda kudarika zvatinenge taziva. Asi kusaziva kwedu kwevanhu kunoreva kuti tinoda kudzoreredzwa pane zvatinotenda uye pamaitiro edu. Saka kuda kuziva kwedu kunotitora zviri nyore kwotiisa munzvimbo dzisingatenderwi. Dzoreredzo yatinoda inobva muShoko raMwari, ratinofanira kudzidza kuvimba mariri.
Simba rekusarudza zvatinoda ndicho chikamu chakanyanya kukosha munjere dzemunhu. Kana risipo tinenge tiri marobhiti.
Mwari anogona kutimanikidza kuita chimwe chinhu nekuti tinofanira kuchiita. Asi zviri nani kwazvo kana tiine pfungwa dzinoda kuzviita kubva pakuda kwedu.
Asi kunogona kushaikwa simba rekuita kuda kwedu kunze kwekunge paita muedzo unouya seimwe sarudzo inoita seyakanaka yatinogona kusarudza, kana tichida.
Kana ndichida kuedza kuvimbika kwako, kubva pakusarudza kwako, ndinosiya mari iri pese pese paunowana mukana wekuiba. Kana usina kubvira wawana mukana wekuba chimwe chinhu, handizozivi kuti wakavimbika here kana kuti kwete.
Pakupedzisira kwehondo Hitira nevanhu vake vaive munzvimbo yekuvanda iri pasi pevhu. Akavarambidza kusvuta fodya. Saka havana kusvuta asi vaive nefodya yacho. Hitira akafungira kuti vose vaive vasiya kusvuta fodya akafadzwa nemutemo wake. Paakafa, chinhu chekutanga chavakaita kutora fodya dzavo vakatanga kusvuta. Saka kwaingova kunyengera kwekuti vaive vasiya kusvuta fodya.
Mwari haadi kuti vanhu vamuterere nekunyengera, nekuti vanofanira kumuterera. Mwari anoda vanhu kuti vamuterere kubva pasi pemoyo yavo, nekuti ndizvo zviri kuda kuitwa nemunhu iyeye.
Munozongoziva chete zvamunoda kuita Chaizvo kana mukaramba miyedzo yezvimwe zvinhu zvinoita kunge zviri nani uye zvinofadza. Saka Mwari, nekuvapa nhengo dzekusangana pabonde, aipa rudzi rwevanhu nzira inoyedza kwazvo kuti vasaterere Mwari, kana vaida kusaterera.
Pane zvivi zvekusangana pabonde zviri kuitwa panyika zvakawanda kudarika dzimwe ndudzi dzese dzezvivi. Ndiyo nzira yakaipa inosarudzwa nevanhu kutevera. Nenzira iyoyo vanhu vanozvibvisa pazano raMwari kana vasingadi kutevera Mwari zvechokwadi.
Ngatitii Mwari aida kuti Adamu naEva vabereke vana nekusangana pabonde.
Vana ivavo vaizova vasina hupenyu husingagumi. Vabereki havagoni kupa vana vavo hupenyu husingagumi.
Adamu akararama makore anodarika 900, akaita vanakomana nevanasikana. Saka vana vangani vangaberekwe? Vakawandisa. Zvaizotora nguva yakaremba sei pasi risati rawandisa vanhu zvisina kukodzera? Kwete nguva refu. Iyi yaive isiri tsika yaizorarama nekusingaperi.
Kana Mwari akaisa muganhu pakukura kwemhuri, aizova achitora simba ravo rekusarudza zvavanoda zvekuita vana vakawanda sekuda kwavo. Asi simba rekuzvisarudzira ndiro rinodiwa naMwari kuti vanhu vave naro.
Zvirwere zvepabonde zvakonzeresa kutambura pakati pevanhu, zvimwe zvakaita seMukondombera, hazvirapiki.
Zvichibva muMagwaro, zvese, kubata chibharo, hupombwe, kufeva, kukwezva mumwe munhu, hungochani, kubata vana zvakaipa nezvimwe zvese zvinoenderana nekukanganiswa kwevanhu zvivi zvakabva pakusangana pabonde uye simba rekuzvisarudzira.
Saka hachisi chinhu chakanaka zvachose.
Mwari anofanira aive nezano rakanaka pakutanga
Paakaisa Adamu naEva mumiviri yenyama, Mwari aida kuti vave saJosefa naMaria. Hapana chaikwanisa kuitwa naJosefa naMaria kunze kwekumirira Mwari. Mwari ndiye aizotanga kufamba ivo votevera.
Mumashure mekunge Adamu nemukadzi wake vagara muEdeni kwenguva yakakwana, Mweya Mutsvene waizozadza Eva, aizobereka Mwanakomana ari mhandara aizosikwa mudumbu rake, zvisina chekuta nemuviri wake wenyama. Aizova mudziyo chete unogara Mwana achikura. Sezvakazoita Maria, makore 4000 akazotevera.
VAHEBERU 10:5 ... Asi makandigadzirira muviri
RWIYO RWASOROMONI 4:12 Hanzvadzi yangu, mwenga wangu, munda wakakomberedzwa, Chitubu chakapoteredzwa, tsime rakafunhirwa.
Munda mucherechedzo wemukadzi. Munda unokombeeredzwa kuti uchengetedzeke. Baba nemurume wemukadzi vanonzwa vachimuchengera.
Tsime rehupenyu husingagumi rinokwanisa chete kubva kudumbu richiri rakavanzwa kuseri kwehumhandara.
GENESISI 2:9 ... uye muti woupenyu pakati pomunda, nomuti wokuziva zva­kanaka nezvakaipa.
Munda mucherechedzo wemukadzi.
Pakati pemuviri wake. Ndipo pane chibereko chake.
Aikwanisa kuunza hupenyu husingagumi nenzira yekubereka ari mhandara.
Kana kuti aikwanisa kuunza hupenyu hunoparara hune zvese hunhu hwakanaka nehwakaipa, asi huchifanira kufa.
Mwari naSatani vaikwikwidzana kuti vatore chibereko chemukadzi.
SaMikaeri Mutumwa mukuru, Mwari akarwa naRusifa kuDenga, akatuka Rusifa nekumushandura kuita Diaborosi.
MuEdeni, Mwari aizotuka mhuka yaive nemano kwazvo kubva pakuva mhuka yepamusoro-soro yaigona kutaura, achiishandura kuita nyoka ine rurimi rwakaita seforoko – kutsanangurwa kwemurevi wenhema. Nhasi nyoka ichiri nehuturu mumuromo mayo. Mucherechedzo wezvitendero zvisimo muMagwaro.
Eva aifanira kubereka Mwana Jesu seMwanakomana anoberekwa nemhandara. Kuzara kwovuMwari kwaizova maari.
ISAYA 7:14 Naizvozvo Ishe amene achakupai chiratidzo. Tarirai, mhandara ichava napamuviri, ichabereka mwanakomana, uchatumidzwa Imanueri.
Emmanueri zvinoreva kuti Mwari unesu.
Jesu aizokura kuva murume kusina zvivi zvekufira.
Aizotaura nekudaidza vatsvene vake kubva muguruva renyika, sezvaachaita nguva iri kuuya pazuva raachamutsa vakafa.
Ipapo kuchazova nevanhu vakakwanira kuzadza nyika kunenge kusina vanosaririra vanozofanira kunotsva kugehena. Ndiro raive zano raMwari rekutanga.
Asi hunhu, chiremera, nekutsungirira zvinoita matambudziko. Uyezve kuzvikudza nekuzvida.
Zvinenge zviri nani kana tikazvarwa tiri vatadzi, tosangana nenyasha uye rudo rwaMwari kuti aregerere zvivi zvedu. Maronda ari mumavoko ake anozotiyeuchidza nguva dzose mubairo waakaripira kuzvivi zvedu. Kuda Muponesi kunobvisa kuzvikudza kwedu. Kuziva kuti takaparadzwa nezvivi, uye takananga kugehena, kunobvisa rudo rwese rwatinarwo nezvivi. Tinofanira kuzvarwa muzvivi, toona kutambudzika nemarwadzo anokonzerwa nezvivi, kuitira kuti tisiye zvakaipa tova neshungu dzekurarama munyika isina zvivi. Nekuregererwa zvivi isu pachedu, kunotiita kuti tisatsvage zvivi zvevamwe, saka nekudaro tinova vanhu vakanaka vanonzwira vamwe tsitsi.
Kuomerwa nekutambura kunovaka kutenda kwedu kusvika kuvimba kwedu kwese kwava muna Jesu.
Tarisai murango waEva.
Mwari haana kubvira ati kwaari, “nokuti waita zvakati ...”.
Mwari haana kupa chikonzero chemurango waEva. Aive anyengerwa zvakazara, kusvikira asisaziva kuti ane chakaipa chaaive aita.
Akafunga kuti murairo waMwari wekuti vaberekane vazadze nyika waireva kuti aifanira kuita zvekusangana pabonde.
Haana kubvira aziva kuti dumbu rake raizoshandiswa naSatani, muti wekuziva, kuunza hupenyu hwakazara zvivi, kana kuti naMwari, Muti weHupenyu, kuunza Mwana anoberekwa nemhandara.
GENESISI 3:14 JEHOVA Mwari akati kunyoka, "Zvawaita izvozvo, watukwa kupfuura mhuka dzose dzesango; uchafamba nedu­mbu rako, uchadya guruva mazuva ose oupenyu hwako.
Mwari akaudza mhuka yakazoshandurwa kuitwa nyoka chivi chayaive yaita.
Mwari akaituka kubva pakuva mhuka yepamusoro-soro pedzimwe dzese yaigona kutaura kuiita nyoka. Kutukwa kwayo kwaizova padumbu rayo. Saka yakatadza nekurara nedumbu rayo pamusoro paEva ichimuzivisa zvinoitwa pakusangana pabonde.
Paakatanga kutenda zvaitaurwa nemhuka yakazoshandurwa kuitwa nyoka, Mweya waMwari wakabva kwaari. Mwari akazadza tsinga dzake neropa kuti arambe ari mupenyu. Mhuka yakazoshandurwa kuitwa nyoka yakabva yamubvisa humhandara zvakadeura ropa rake.
Saka chivi chekutanga chaive mhuka, mhuka inorarama, ichideura ropa. Saka Mwari akagamuchira kudeurwa kweropa remhuka kuripira zvivi.
Eva aive aparadzwa.
Adamu haana kunyengerwa. Akaziva kuti mwenga wake aive atadzira Mwari. Asi aimuda zvakanyanya zvekuti akatora sarudzo yakoma akatadza pamwechete naye. Mwari neimwe nzira aizoita zano redzikinuro.
I TIMOTIO 2:14 NaAdamu haana kunyengerwa, asi mukadzi wakanyengerwa akapinda pakudarika;
Jesu aida Mwenga wake zvakanyanya zvekuti akava chivi akafa, akatakura zvivi zvedu zvese kuenda kugehena kunozvirasira pana Diaborosi.
Mwari haana kugadzirisa chivi chakaitwa naEva muEdeni, nekuti Eva aive aita chivi chisingagoni kugadziriswa. Mwari aida mhandara kuti itakure mimba yeMwanakomana. Eva aive asisiri mhandara, saka Mwari haana kugadzirisa chivi ichi.
Saka Mwari aizomirira makore 4000 kuti ashandise kutenda kwaMaria kuzadzisa Shoko rake.
Mbeu yemhuka yakashandurwa ikaitwa nyoka ndiyo mbeu yehurune yemunhurume. Rudzi rwevanhu rwese rwaizoberekwa nenzira iyoyo. Saka tese takaberekwa tiri vatadzi.
Munhu mumwechete chete asina zvivi ndiye akaberekwa nemhandara Jesu.
Mai vaDavid vaive vakawanikwa. Saka Davidi aiziva pamusoro pechivi chekutanga.
Chivi chakapinda panyika chikatadzisa kubereka kwemhandara.
57-0915E VAHEBURU CHITSAKO CHECHINOMWE, CHIKAMU 1
Mwari akabvisa mukadzi parutivi rwaAdamu. Ndizvo here? Mukadzi akaenda akanobereka vanhu nekusangana pabonde.
Raive risiri Apura! Akaziva sei kuti aive akashama? Takadarika nemazviri. Hwaive hukama hwezvepabonde.
Tarirai: Hama Branham vakataura kuti chivi chekutanga chaive chisingori hupombwe, chaive kusangana pabonde.
63-0317 MUSIYANO URI PAKATI PENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE NEZVISIMBISO ZVINOMWE
Asi murairo waida Hama mudzikinuri, uye munhu wese panyika aive akaberekwa nekusangana pabonde. Zvino, hamuoni here, ndipo pazvinobva, ndipo pakatangira zvivi. Muri kuona pazviri manje? Ndipo panopindira mbeu yewakaipa mhuka yakashandurwa kuitwa nyoka. Mazviona?
GENESISI 3:16 Kumukadzi akati, "Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mi­mba kwako, uchabereka vana uchirwa­dziwa; kuda kwako kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako
"Ndichawanza kurwadziwa kwako nokuora mimba kwako"?Zvinoita sezvisinganzwisisiki. Vaive audzwa kuti vaberekane.
Asi aive azviita nenzira yakaipa. Aifanira kubata mimba kamwechete neMweya Mutsvene. Mwana iyeye aizokura otaura achidaidza vatsvene vese kubva kuguruva renyika.
Asi zvino aive amire pamberi paMwari abata mimba yemhuka yakazotukwa ikashandurwa kuitwa nyoka. Aive atora mimba. Saka Mwari akamuudza kuti aizowedzera nzira iyi yekubata nayo mimba. Ndiyo nzira yaizoberekwa rudzi rwevanhu. Asi aizorwadziwa pakuzvara mwana kumuyeuchidza kuti aive aita zvakaipa.
2 Akazopo­nazve munun’una wake Abero. Abero wakanga ari mufudzi wamakwai, Kaini wakanga ari murimi wevhu
Chiitiko chimwechete chekubata mimba nevana vaviri vanozvarwa vari mapatya. Asi ko kubata mimba kwakaitika mumunda weEdeni?
Akavanza pamusoro paKaini nekutaura kuti akamupiwa naMwari. Ichokwadi. Hupenyu hwese hunobva kuna Mwari. Asi nei asina kutaura kuti Kaini aive abva kuna Adamu?
Uye Kaini ndiye akaita murevi wenhema wekutanga uye mhondi.
Ndihwo hunhu hwaSatani aive ari mumhuka yakazotukwa ikashandurwa kuitwa nyoka payaive ichiri pamusoro pedzimwe mhuka dzese asi pasi pemunhu.